Ireo vaovao 5 lehibe avy amin'i Lucid Lynx | Avy amin'ny Linux
Ny kinova manaraka an'ny Ubuntu, Lucid lynxvao nahatratra beta, ary ny zava-drehetra dia manondro fa izy io dia ho iray amin'ireo famoahana tena manan-danja indrindra amin'ny tantaran'ny fizarana Linux. Tsy noho ny fiovana lehibe naseho fotsiny fa noho ny Ubuntu 10.04 no fanontana manaraka miaraka amin'ny fanohanana maharitra (LTS na Fanohanana Long Term Support) ary, toy izany, ireo mpampiasa birao izay mandoa vola kely dia afaka mahazo fanampiana ho an'ny telo taona; mpampiasa mpizara orinasa, dimy taona. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ity no fanontana izay hahasoa (na tsia) ilay orinasa mitazona Ubuntu: kanônika. Izany dia tokony ampiana ny vola mety hiditra noho ny iray amin'ireo fanampiana vaovao amin'ny Ubuntu: ny Fivarotana mozika UbuntuOne. Ity fivarotana mozika an-tserasera ity dia mikasa ny haka tahaka ny iTunes Store ary amin'izany dia mamatsy vola ny tetikasa Canonical, ao anatin'izany ireo kinova Ubuntu.
Saingy, ho fanampin'ireo fanovana ireo, izay hantsoiko hoe "stratejika" ary na dia misy akony amin'ny mpampiasa iraisana aza dia mamaly bebe kokoa amin'ny antony ara-barotra na ara-pandaminana, hisy fiovana hita maso sy fanamboarana hafa izay hanova tanteraka ny traikefan'ny mpampiasa Ubuntu .
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, ny fanambarana nataon'i Mark Shuttleworth, mpanorina ny Canonical sy Ubuntu, momba izay hitranga amin'ny Ubuntu 10.04 dia tsy tokony hisarika ny saina. Araka ny Shuttleworth dia nipoitra tamin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fanovana lehibe indrindra amin'ny kinova Ubuntu vaovao, "Tsy demokrasia io. Fanamarihana tsara, fampahalalana tsara, tongasoa foana izy ireo. Saingy, tsy hametraka ny fanapaha-kevitra izahay. " Raha ny tena izy, ny ezah'i Shuttleworth ho resahina dia ny Ubuntu, ary koa ny ankamaroan'ny tetik'asa lehibe misokatra, anisan'izany ny Linux kernel, dia tsy demokratika velively. Fahamendrehana izy ireo, ary izay mpikambana ao amin'ny fiarahamonina izay mihevitra ny hafa ho diso hevitra.
Farany, na dia mieritreritra momba ny alehan'ny bokotra eo am-baravarankely aza ny sasany, Shuttleworth dia manahy, tsy dia ny hanao kinova malaza ho an'ny mpankafy, fa ny hanao izay tsara indrindra hisarihana ireo mpampiasa izay vonona handoa ny fanampiana ilaina. Toa tsy mahafinaritra izany, saingy io, raha ny fahitako azy, no antony tokana manazava ny fiovana rehetra hitranga ao amin'i Lucid Lynx.
Inona ny vaovao ho entin'i Canonical sy Ubuntu amintsika amin'ity indray mitoraka ity?
1. Boky Torolàlana
Eny, matotra izany. Taona maro lasa izay izay olona eto amin'ny tontolon'ny Linux dia mampiditra boky torolàlana miaraka amin'ny rindrambaiko. Ny valiny dia ny habetsaky ny mpampiasa misavoritaka ary orinasa miroborobo ho an'ireo antoko fahatelo natokana hanoratana boky torolàlana ho an'ny mpampiasa "tsy ara-potoana", hiantsoana azy ireo hoe. Na dia marina aza fa afaka mahita ny valin'ny fanontanianao momba ny Linux ao anaty forum ianao, toa ny LinuxQuestions na, ho an'i Ubuntu manokana, ao amin'ny Ubuntu Forums, mbola mila manao googling be ianao vao hahita valiny vitsivitsy. Tena tsara izany ho an'ny geek toy ny iray, fa ny tena izy dia ny ankamaroan'ny olona dia maniry ny hanana olan'ny solosaina vitsy araka izay azo atao. Misy kinova voalohany amin'ny boky fampianarana ho alaina.
Sexy? Tsia. Fa io karazana mampaninona na mahatsiravina io fa tena ilaina fanampiana fanampiny izay afaka manintona an'i Ubuntu ho an'ny vondrom-piarahamonina mpampiasa izay tsy dia mahalala hoe inona ilay Linux.
2. Fampidirana amin'ireo tambajotra sosialy
Raha mampatsiahy anao ny boky taloha iray ny boky fampianarana, dia ny fampidirana ny Ubuntu 10.04 amin'ireo tambajotra sosialy vaovao dia ny mikasika ny "tsara 2010" izay ilainao. Lucid Lynx dia mamela anao hifandray amin'ireo tambajotra sosialy marobe hatrany amin'ny biraonao. Ao ambadiky ny seho, inona no mahatonga ny zavatra rehetra hiasa dia programa kely antsoina hoe Gwibber. Manohana ny Digg, Facebook, Flickr, Identi.ca, Jaiku, Twitter ary RSS feeds izy izao. Na dia azonao atao aza ny mampiasa azy tsy miankina, ny interface tsara dia ny MeMenu.
Ny mpivady Gwibber / MeMenu dia mbola manana tidbits vitsivitsy hamafana ihany, saingy antenaina fa hamboarina ireo lesoka ireo amin'ny andro hisian'ny famoahana Ubuntu Lucid Lynx: 29 aprily. Raha tsy izany dia antenaina fa hampihemotra ny fandefasana izy ireo mandra-pahatongan'ny "lafatra" rehetra.
3. Lohahevitra birao vaovao
Ny Ubuntu GUI dia hijanona ho GNOME 2.28. Canonical dia tsy ho sahy, amin'izao fotoana izao, "milalao" miaraka amin'ny kinovan'ny topi-maso Ny GNOME 3, izay, etsy ankilany, dia nahemotra hatramin'ny septambra 2010. Tsy midika akory izany fa ny interface dia tsy niova tanteraka, raha ny tena izy dia tena hafa ankehitriny. Rehefa afaka dimy taona ny volontsôkôlà latsaka sy ny voasary "olombelona", Canonical dia mivadika lohahevitra maivana kokoa izay manambatra volomboasary malefaka sy volomboasary "olombelona" mahazatra. Io no veloma ny "poop brown" halan'ny kinova taloha. Nanao fanovana madinidinika hafa koa izy ireo, miaraka amin'ny tanjona hahatonga ny interface ho manintona kokoa. Miasa? Miankina amin'ny olona miresaka aminao izany. Ny marina, raha ny fahitako azy, tsy dia misy mahasamihafa azy. Saingy ny ezaka nataon'ny vondrona mpamorona Canonical mba hahatonga ny interface ho manintona kokoa sy sariaka kokoa dia fantatra.
4. Mora ampiasaina
Lohahevitra "mafana" iray hafa amin'ity kinova ity ny fanilihana ireo programa tsy dia misy dikany. Rahoviana Nanapa-kevitra ny tsy hampiditra ny GIMP i Canonica, ilay programa fanovana sary malaza, mahery, nefa sarotra, mihoatra ny iray no nitsambikina avy teo amin'ny sezany ary nitaraina noho ny famerenany ny toerany. GIMP (Program momba ny fanodikodinam-sary GNU) dia, iray tokoa, malemy. maimaim-poana indrindra. Na izany aza, nanapa-kevitra ny Canonical fa ny desktop desktop sy ireo programa tafiditra ao dia tokony ho mora ampiasaina.
Noho io fanapahan-kevitra momba ny famolavolana io dia azonao antenaina fa ilay rindrambaiko tafiditra ao amin'i Lucid Lynx dia tsy ho ilay mahery indrindra na feno, fa ny mora ampiasaina indrindra. Ka, handoro CD iray dia ho hitan'izy ireo Brasero fa tsy GnomeBaker, PiTiVi fa tsy Cinelerra ho an'ny fanovana horonan-tsary. Na izany na tsy izany, azon'izy ireo ilay hevitra.
Raha mila fitaovana matanjaka kokoa ianao dia nanamora ny fametrahana programa vaovao miaraka amin'ny fampidirana Ubuntu Software Center. Ny drafitr'i Canonical dia toa hanamora ny fampidirana mpampiasa vaovao amin'ny tontolon'ny Linux ary avy eo eny, raha tian'izy ireo, apetraho amin'ny tanana "ny programa" mahery ".
5. Fanombohana tena haingana
Mino aho fa tsy misy na inona na inona mankahala ny mpampiasa antonony mihoatra ny miandry ny taona hahavitan'ny OS ny booty. Marina indrindra izany ao amin'ny Windows satria na oviana na oviana ny hosoka dia manery antsika hamerina izany.
Eny, i Lucid Lynx dia mbola tsy mandefa baoty haingana tahaka ny Fedora, saingy manandrana manao ny OS boot haingana kokoa sy haingana kokoa izy ireo. Ny tanjona dia ny hanao Baoty Ubuntu afaka 10 segondra na latsaka mampiasa Upstart, izay ho avy hisolo ny taloha sy ny volony init daemon hanombohana ireo dingana sy serivisy fanombohana.
Ataovy miaraka daholo izany ary manana Linux haingam-pandeha ianao, raha ampitahaina amin'ny Windows miadana be, izay hanamora ny fiainana ny mpampiasa maro.
Na dia voafetra ihany aza izahay amin'ny filalaovana kinova voalohany an'i Lucid Lynx, ny zava-drehetra dia toa iray amin'ny fizarana Linux be mpampiasa indrindra ny zava-drehetra, noho ny fahatsorany sy ny fisintomana an-tsary vaovao.
Raha ny fahitan'i Canonical azy dia mety ho fandrosoana lehibe ity hahitanao tombony sy famatsiam-bola ho an'ireo tetikasanao. Azoko antoka fa na amin'ny alàlan'ny varotra fanampiana na amin'ny alàlan'ny UbuntuOne Music Store, izay niresaka momba ny lahatsoratra teo aloha, Lucid Lynx dia ho lasa iray amin'ireo hetsika ara-barotra lehibe indrindra eto amin'ny tontolon'ny Linux.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ireo zava-baovao 5 an'i Lucid Lynx
Lahatsoratra tena tsara, saingy mieritreritra aho fa misy andian-teny sasany mety hampikorontana:
1- «(…) Ubuntu 10.04 no fanontana manaraka miaraka amin'ny fanohanana maharitra (LTS na Fanohanana maharitra) ary, toy izany, ireo mpampiasa birao mandoa vola kely dia afaka mahazo fanampiana mandritra ny telo taona; mpampiasa mpizara orinasa, dimy taona. (…) »
Eny, tsy mila mandoa na inona na inona mihitsy ianao ... Tsy tokony hafangaro amin'ny serivisy teknika omen'ny Canonical izany, fa ho an'ny Rafitra fiasa kosa dia tsy tokony handoa denaria iray akory ianao. Izany hoe, raha te hampiasa ny distro isika, na birao io na serivera, dia misintona isika ary dia izay; farafaharatsiny amin'ny zavatra anaovako dia mbola tsy novakiako fa hisy izany.
2- Araka ny nolazain'i Shuttleworth tamin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fanovana lehibe indrindra amin'ny kinova Ubuntu, «Tsy demokrasia io. Fanamarihana tsara, fampahalalana tsara, tongasoa foana izy ireo. Saingy, tsy hametraka ny fanapaha-kevitra izahay. "
Tsia, tsy i Shuttleworth no namorona ny dinika, fa nanatevin-daharana adihevitra efa natsangana izy ary tsy izany ny teny tena izy, tiako holazaina fa ao anatin'ilay tatitra momba ny bibikely, ny voalaza "dia tsy mifidy ny endrika sary" isika. "Tsia. Tsy demokrasia io. Tongasoa tsara, hevitra tsara, angon-drakitra tsara. Saingy tsy mifidy amin'ny fanapahan-kevitra momba ny famolavolana isika. »
Ho fanampin'ny valin'ny fanehoan-kevitra manokana.
3- fa amin'ny fametrahana ny tsara indrindra hisarihana ireo mpampiasa izay vonona handoa ny fanampiana ilaina.
Mianiana aho fa tsy namaky azy io, fa raha diso aho dia mangataka aminao aho azafady mba lazao amiko hoe aiza sy inona no hovakiana, satria efa taitra aho.
Ankoatra izany, ry rahalahiko, nandefa lahatsoratra tena lehibe ianao! Famakafakana tena tsara, izay manana ny hasin'ny fanambarana fa tsy mampiseho izay avelan'ny olon-dehibe mipetraka eo amin'ny seza miandry. Bebe kokoa amin'ny mpamandrika reraka Windows (hamintina azy :))
Eny, misaotra betsaka tamin'ny fiderana. Ho valin'ny fanehoan-kevitrao:
1) Angamba tsy dia naneho ny hevitro tsara aho: ny ezahiko nolazaina dia ireo mpampiasa maniry hahazo fanampiana "ofisialy" (tsy an'ny forum na bilaogy) dia tsy maintsy mandoa vola kely. Tsy vaovao izany eo amin'ny tontolon'ny Linux: tetikasa maro, hahazoana tombony ary hamatsy vola, mandefa ilay programa maimaimpoana mba ahafahan'ny tsirairay misintona sy mampiasa azy, saingy omena ny fanampiana.
2) Marina ny anao amin'izao fotoana izao. Ny hevitr'i Shuttleworth dia nifandray tamina olana iray manokana: ny hametraka na tsia ny fanontaniana famolavolana. Ity fanehoan-kevitra ity koa dia ampahany amin'ny resabe ateraky ny fiovan'ny toeran'ny bokotra (maximize, minimal, close) ny windows.
3) Raha ny tena izy dia ampahany kely amin'ny fandinihana lalina indrindra an'ilay lahatsoratra. Tsia, tsy ho hitanao na aiza na aiza io hevitra io. Na izany aza, ity no noezahiko nampitaina: ny fiovana rehetra nampidirina tao amin'ny Lucid dia misy tombony ao an-tsaina (amin'ny alàlan'ny fanohanana sy ny Music Store) ary, vokatr'izany, dia hiezaka ny hanao Linux ho OS tena mora sy manintona. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy miezaka ny hahatonga ny Linux ho mora sy manintona hanomezana fahafaham-po ny mpankafy izy ity, fa ny hanao orinasa. Ity dia zavatra mety toa hafahafa eo amin'ny tontolon'ny rindrambaiko. maimaim-poana, fa any ambaniko dia mieritreritra aho fa tsy misy fifanarahana lehibe. Na izany na tsy izany, resaka lava be io. Hiteny ny fotoana.
Mbola misaotra anao indray naneho hevitra !!
Tsy misy anadahy, misaotra anao noho ny valiny ...
Azoko izao. Ary eny, marina tokoa araka ny voalazanao, Canonical dia nandefa ny serivisy izay raha maniry, dia manakarama fanampiana ara-teknika, miankina amin'ny drafitra nifanarahana, manana fanohanana amin'ny fotoana rehetra ...
Etsy ankilany, rehefa manasongadina ianao, Canonical, ary miaraka amin'ny antony mirindra, dia mizara rindrambaiko maimaim-poana, fa izy io koa dia miasa ho toy ny orinasa manome serivisy manampy ny roa tonta hamatsy vola ary hanome safidy bebe kokoa an'ireo mpampiasa nefa tsy mametra ny fampiasa, mampiditra bebe kokoa ...
Aza adino fa orinasa izy io, ary na ianao manasongadina azy, ohatra amin'ny Music Store, na ny fanohanana ara-teknika mitovy ...
Tsy hitako ihany koa ny tsy fitoviana, Red Hat no manao azy ary androany dia mivarotra tsara kokoa eo amin'ny tsenambola noho ny Microsoft ... Zavatra samy hafa izy ireo, ny tombontsoan'ny orinasa mino ny Free Software ary mizara izany toy izany ... tsy mahita ny olana ...
Inukaze dia hoy izy:
Eto amin'ny Ubuntu Lucid, 32 Bit, mbola tsy hitako izay nanombohana ny "daemon", mandritra ny "Startup" an'ny rafitra.
Mila ataoko tsy mihazakazaka "saro-tahotra" izany, ary ataoko mihazakazaka "CDEmu", ireo daemon 2 ireo, mba hahafahako milalao Final Fantasy VII miaraka amin'i Wine1.2 avy amin'ny Ubuntu 10.04 Lucid ^^
Mamaly an'i Inukaze
timekpr, programa hamerana ny fampiasana ny solosaina